Ny fiaramanidina misy olona 6 an-tsambo dia nanjavona tany amin'ny Farany Atsinanan'i Russia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Ny fiaramanidina misy olona 6 an-tsambo dia nanjavona tany amin'ny Farany Atsinanan'i Russia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nanjavona ny fiaramanidin'ny Minisiteran'ny Firenena Misionera Rosiana tamin'ny radara fanamoriana manodidina ny faritry ny Reserve Reserve an'ny Khekhtsir ao amin'ny faritr'i Khabarovsk any amin'ny Farany Atsinanan'i Russia.
Nanjavona tao amin'ny radar sidina akaikin'i Khabarovsk ny fiaramanidina Antonov An-26 an'ny minisitry ny vonjy taitra rosiana.
Nisy fiaramanidina misy olona enina ao anaty fiaramanidina ary nanao sidina teknika ilay fiaramanidina.
Sarotra ny fikarohana noho ny haizina sy ny toetr'andro tsy mahafinaritra, raha ny filazan'ny minisiteran'ny asa fanaovan-gazety.
Ny serivisy fanaovan-gazety an'ny minisiteran'ny vonjy taitra rosiana dia nanamafy fa ny fiaramanidiny An-26 dia nanjavona tamin'ny radar sidina 38 kilometatra (23.5 miles) avy amin'ny seranam-piaramanidina Khabarovsk, manodidina ny faritry ny Reserve Reserve voajanahary Khekhtsir ao amin'ny faritry Khabarovsk any amin'ny faritra atsinanan'i Russia.
Nanana ekipa mpandeha misy olona enina ao anaty fiaramanidina ilay fiaramanidina ary nanao sidina teknika, araka ny fampitam-baovao.
“Tamin'ny 11:45 ora Mosko, ny Ivotoerana fitantanana krizy ao amin'ny minisiteran'ny vonjy taitra any Russia ao amin'ny faritra Khabarovsk dia nahazo hafatra fa Antonov An-2Fiaramanidina 6 no nanjavona tamin'ny radar sidina 38 km miala ny seranam-piaramanidina Khabarovsk, azo inoana fa tany amin'ny faritry ny Reserve Reserve Nature Khekhtsir. Raha ny angon-drakitra voalohany dia nisy ekipa mpandeha iray nisy olona enina tao anatiny ”, hoy ny serivisy ho an'ny mpanao gazety, ary nanao sidina teknika ilay fiaramanidina.
"Ny fikarohana dia sarotra amin'ny fotoana maizin'ny andro sy ny toetr'andro tsy mahafinaritra", hoy ihany ny minisitera.
Mpanavotra maherin'ny 70 sy helikoptera mpitsikilo no nalefa tany amin'ilay toerana nitrangan'ny fianjerana.
Lozam-pifamoivoizana misy ny fiaramanidina efa rovitra ao anaty ala sy lavitra an'i Russia Lavitra Atsinanana dia mbola tena fahita.
Tamin'ny volana aogositra, olona valo no maty rehefa niady tamin'ny helikoptera Mi-8, niaraka tamina olona 16, ny farihy iray tao amin'ny saikinosy volkano Kamchatka noho ny fahitana tsy fahitana azy.
Tamin'ny volana jolay dia fiaramanidina iray misy mpandeha 22 sy mpiasa an-tsambo enina no nianjera rehefa hidina tao Kamchatka izy io, ary tsy nisy niangana.
Ny Antonov An-26 (NATO tatitra anarana: Curl) dia maotera maotera turboprop sivily sy miaramila fitaterana miaramila, natao sy novokarina tany amin'ny Firaisana Sovietika 1969 ka hatramin'ny 1986.
Ny An-26 koa dia novokarina tsy nisy fifanarahana fahazoan-dàlana tany Shina avy amin'ny Xian Aircraft factory satria Y-14, novaina taty aoriana mba ho tafiditra ao amin'ny andian-dahatsoratra Xian Y7.